Umgangatho oPhezulu wokuvula umngxuma wengxubevange yodidi oluphezulu Umthengisi kunye neNkonzo | Jiali
Isivula-mngxuma esihle sokusebenza ngamaplanga
I-Bimetal Hole Opener eneRo...
Mid-uluhlu olwandisiweyo ingxubevange ho...
I-Titanium-plated hexagonal s...
Umgangatho ophezulu we-alloy hole op...
Isivuli somngxuma we-alloy womgangatho ophezulu
Ubude bokusebenza obusebenzayo be-25MM, iyakwazi ukucubungula iipleyiti zentsimbi ezishinyeneyo kwaye igqobhoze imathiriyeli yomphezulu egobileyo njengemibhobho yentsimbi eshinyeneyo. Xa usika izinto ezipholileyo, ubushushu bomgca wokusika kufuneka buzaliswe ngokupholisa.
Umgca wokusika wenziwa ngexesha elinye ngumatshini wokusila we-CNC ozenzekelayo. Inokuchaneka okuphezulu, i-alloy cutting edge ayilula ukuwa, i-cut cut ibukhali, i-cut cut ilula, i-edge of the hole ayinayo i-burrs, i-smooth, kunye ne-concave.
Isivuli somngxuma senziwe ngesamente ye-carbide, uyilo luyinoveli, lusengqiqweni, kunye nohlobo olwandisiweyo.
Inokuthi ifakwe kwi-jackhammers, ii-bench drills okanye abanye oomatshini. I-drilling ilula kwaye iyakhawuleza, kwaye ukugrumba kuzinzile kwaye kusindisa abasebenzi.
Ubukhulu bomngxuma ogrunjiweyo bugudileyo kwaye buchanekile, kwaye unokusetyenziselwa ukugrumba intsimbi eshinyeneyo, ipleyiti yentsimbi eshinyeneyo, intsimbi ebhityileyo, intsimbi eshinyeneyo engekho mgangathweni, njl.
Ilungele ukugrumba iipleyiti zetsimbi ezahlukeneyo ezifana nepleyiti yentsimbi, intsimbi yecandelo, i-castings, ialluminiyam ialloy, ipleyiti yentsimbi, insimbi engenasici, njl.
Inokufakwa kwisixhobo se-chuck esinemihlathi emithathu enje ngombane, iidrill zenqwelomoya, iibhentshi zokuqhuba, njl.
Izixhobo zokulungisa izitena ezisicaba
Square isiphatho ezine emhadini sombane isando sokomba
(umqheba wesikweri awufumaneki)
I-hammer drill yombane enesiphatho esijikelezayo, imingxuma emibini kunye neegrooves ezimbini
Inkqubo yokufakela isivuli somngxuma
Faka i-drill ephakathi kwintonga yokwandisa
Faka i-drill ephakathi ukuya ezantsi
Faka izikrufu kwintonga yokudibanisa.
Qinisa isikrufu esisetiyo ngesikrufu
Faka umngxuma wokuvula intonga yokudibanisa
Qinisa umngxuma wokuvula kunye nentonga yokwandisa
Amaqela amathathu ee-blades ahlukeneyo ayilwe ngokwemigangatho, kwaye ukuchasana kokusika kuncinci
Ukususwa kwe-Chip kulula, ukusika kuzinzile, kunye nokugrumba kuhamba kakuhle
1.Ngokungqinelana nezixhobo ezahlukeneyo kunye neenkcukacha zesixhobo, nceda ukhethe isantya esifanelekileyo.
2.Kwinqumlo eqhubekayo, nceda ukhethe isantya esisezantsi.
yenziwe ngentsimbi eshayinayo Intsimbi eqhelekileyo Ipleyiti yeAluminiyam
20-35m / min 40-60m / min 60-100m/min
1. Qwalasela ingqibelelo ye-drill yomngxuma phambi kokusetyenziswa.
2. Amacala amathathu okuphatha okuhambelanayo kufuneka agxininiswe xa i-drill drill ifakwe kwi-drill yombane.
3. Gcina i-verticality ye-drill drill kunye ne-workpiece xa ubhobhoza umngxuma.
4. Sebenzisa amandla amancinci okutya xa uqalisa ukugrumba, kwaye usebenzise amandla okutya okuphakathi emva kokubeka.
5. Ngethuba lokusebenza kwe-drilling, isantya akufanele sibe phantsi kakhulu ukuze ugweme i-jamming ye-knife edge kunye nokubangela ukuwa kwesixhobo.
6. Xa i-drill center ibhobhoza i-workpiece, amandla akufanele abe mkhulu kakhulu ukuphepha ukungqubana okunobundlobongela phakathi kwe-blade kunye ne-workpiece.
7. Emva kokuba i-drill drill drill ngokusebenzisa i-workpiece, i-drill drill kufuneka ihoxiswe kwi-workpiece ngelixa i-drill drill ijikeleza.
8. Xa ngokuqhubekayo ubhobhoza imingxuma, sebenzisa i-cutting fluid ukupholisa umda wokusika.
Iprofayili yezinyo ezithathu ezidityanisiweyo
Ubume bezinyo lomgca wokusika luqulunqwe ngumphetho wangaphakathi, umda ophakathi kunye nomda wangaphandle, onciphisa amathuba okuphuka kwamazinyo,
Amandla amancinci okusika, ukususwa kwe-chip egudileyo kunye nobomi benkonzo ende.
Kuba intsimbi stainless, I-beam, ibhulorho, Tong, aluminiyam ingxubevange
I-Iron, ifayibha yeglasi eyomeleziweyo yeplastiki kunye nezinye iintsimbi, kunye nebhentshi yoqheliso inokuvula ubukhulu be-2-25mm.
Kukho imifanekiso, kukho ifashoni yokwenene!
Ukuba umgangatho ulungile okanye awukho kumthengi
Ngaphambili: I-Zinc Alloy Hands Free Door Operator Opener Hardware
Okulandelayo: I-Titanium-ifakwe i-hexagonal shank eyandisiweyo intambo yomnqamlezo unxantathu
Aircraft Uhlobo Umngxuma Saw
I-alloy Hole Saw
I-Bimetal Hole yabona
I-Brazed Hole Saw
I-Ceramic Marble Hole yabona
I-Concrete Hole Saw
Saw yeConcrete Wall Hole
I-Diamond Hole yabona
Diamond Hole Saw Kit
Isantya esiphezulu seSteel Hole Saw
Umngxuma wabona Bit
Umngxuma wabona umsiki
Umngxuma waSaw Drill Bit
Metal Hole Saw
Wabona umngxuma wodonga
Woodworking Hole Saw
Zinc Ingxubevange yezandla Izandla zasimahla zoMsebenzi womnyango wokuvula nzima...
IiBits ze-Shank eziNqobileyo ze-HSS Twist Drill ze-Drillin...
Kingdrilling High Speed ​​Quarry Drilling DTH Ope...
I-Magnetic Roller Sleeve (CB435A/CB436A)
Amacandelo eSandwich Factory ethe ngqo yeDayimane B...
Isivula sentsimbi esinesantya esiphezulu
IdilesiYueqing Furongzhen Changshantoucun Umhlaba HEZOC